China Kubheka Mafuta Mugadziri uye Anotengesa | Dongfang
Tsanangudzo Maitiro echoto yekubika inosanganisira kupisa inosara yemafuta feed kune yayo yekupisa kupisa tembiricha ine yakawanda yakafanana inopfuura. Izvi zvinopwanya masimbi anorema emagetsi e hydrocarbon mamorekuru akasara emafuta mu coker gasi mafuta uye petroleum coke. Kunonoka coker ndechimwe chezvikamu zvinoshandiswa mumafuta akawanda emafuta. Kubuditsa kwe coke kubva kunonoka kunonoka kuita nzira kubva pa 18% kusvika makumi matatu muzana nehuremu hwezvipfuyo mafuta akasara, zvichienderana nemashandisi akasiyana uye compo ...
Kuita kwechoto kunosanganisira kupisa sosi yemafuta yakasara kune yayo yekushisa kupisa tembiricha nemativi akawanda akafanana. Izvi zvinopwanya masimbi anorema emagetsi e hydrocarbon mamorekuru akasara emafuta mu coker gasi mafuta uye petroleum coke.
Kunonoka coker ndechimwe chezvikamu zvinoshandiswa mumafuta akawanda emafuta. Kubuditsa kwe coke kubva kunonoka kunonoka kuita nzira kubva pa 18% kusvika makumi matatu muzana nehuremu hwemafuta ehupfumi inosara, zvichienderana nekushanda kwakasiyana uye kuumbwa kwechikafu. Gohwo rechoto chedu chechefu rinogona kunge riri mamirioni kusvika kune 1,2 miriyoni yeatani.
Kunonoka kubikwa chevhowa ndechimwe chezvikamu zvinoshandiswa mumafuta akawanda ekuchenesa. Kubuditsa kwe coke kubva kunonoka kunonoka kuita nzira kubva pa 18% kusvika makumi matatu muzana nehuremu hwemafuta ehupfumi inosara, zvichienderana nekushanda kwakasiyana uye kuumbwa kwechikafu.
1,2 miriyoni t / y Yakanonoka Coker
1 miriyoni t / y Kunonoka Coker
Yapfuura: Hydrogen Kugadzira Shanduko Ificha
Inotevera: Atmospheric uye Vacuum distillation Unit
Kuderedza Block , Chill Mvura Muchina , Railway Kukurukura , Malo Chikamu cheKuisa , Rail Transit , Ironworks ,